Haddii Aad Cid Keenaysaan Difaacan Keena- Xidig Real Madrid Ka Tirsan Oo Maamulka Kooxdiisa Hal Bartilmaameed Kula Taliyay. – GOOL24.NET
Haddii Aad Cid Keenaysaan Difaacan Keena- Xidig Real Madrid Ka Tirsan Oo Maamulka Kooxdiisa Hal Bartilmaameed Kula Taliyay.
Kooxda Real Madrid ayaa xili ciyaareedkan ku soo dhibtoonaysay goolasha badan ee laga soo dhalinayay waxaana jiray magacyo badan oo difaacyo kooxda Madrid lala xidhiidhinayay laakiin xidig kooxda Los Blancos ka tirsan ayaa codsi u diray maamulka kooxdiisa si ay ula soo saxiixdaan difaac uu aad ula dhacsan yahay.
Real Madrid ayaa 14 gool looga soo dhaliyay 11 kii kulan ee ay horyaalka La Liga ka soo ciyaartay waana goolal ka badan sagaalkii gool ee waqtigan oo kale laga soo dhaliyay xili ciyaareedkii hore waxaana Los Blancos lala xidhiidhinayay difaacyada kala ah Marc Barta, Kalidou Koulibaly iyo Alfonso Pedraza.
Laakiin Nacho Fernandez oo ka hadlayay shirka jaraa’id ee kooxdiisa Real Madrid ee ka hor kulanka Champions league ee Victoria Plzen ayaa ku dooday in haddiiba ay kooxdiisu difaac la soo wareegayso in ay Bernabeu dib ugu soo celiso Mario Hermoso.
Mario Hermoso waa 23 sano jir ka soo baxay xarumaha da’yarta Real Madrid balse hadda ka tirsan kooxda duulaysa ee Espanyol oo uu shaxda kooxdeeda ku soo bilawday dhamaan 11 kii kulan ee ay ka soo ciyaartay La Liga wuxuuna Mario Hermoso door muhiim ah ka ciyaaray in Espanyol ay kaalinta labaad kaga jirto La liga.
Mario Hermoso ayaa heshiiskiisa Espanyol lagu burburin karaa 32.5 milyan euros laakiin waxa jira warar sheegaya in Real Madrid ay hore qodob ugu darsatay heshiiskii uu Mario Hermoso ugu biiray Espanyol isla markaana ay Bernabeu ugu soo celin karto 7.5 milyan euros oo kaliya taas oo qiimo aad ugu hooseeya u ah Mario Hermoso oo xaalad cajiib ah ku jira.
Haddaba Nacho Fernandez oo maamulka kooxdiisa Madrid xusuusinaya in Mario Hermoso ay kooxda dib ugu soo celiyaan haddii ay difaac la soo wareegayaan ayaa yidhi: “Haddii ay cidi imanayso, waaan rajaynayaa in uu noqdo Mario Hermoso.”
Wargayska Marca ayaa Mario Hermoso waydiiyay haddii uu dib ugu soo laabanayo Real Madrid wuxuuna ku jawaabay: “Waxaan aad ugu faraxsanahay Espanyol, kooxda ayaa ii yeedhay waxayna i siisay fursad uga ciyaarayo horyaalka herka kowaad si aan riyadayda u fuliyo”.
“Kooxdaydu waa Espanyol, waxa hadda jooga ayaan diirada saarayaa, ma jiro qof og mustaqbalka waxa dhici doonaa laakiin anigu wax walba waxaan siinayaa kooxdayda hadda. Waxaan saxiixay saddex xili ciyaareed, waxaan rajaynaa in aan halkan muhiim ka ahaado” ayuu Mario Hermoso hadalkiisa sii raaciyay.
Real Madrid ayaa dhaqan u leh in ay qodob ku darsato ciyaartoyda da’yarta ah ee ay kooxdeeda ka dirto si ay u qiimo hooseeya ugu soo ceshan karto haddii ay heer fiican gaadhaan waxayna hore taas ugu samaysay ciyaartoy badan oo ay ka mid yihiin Dani Carvajal iyo Marco Asensio oo isaga laftiisu Espanyol isku soo muujiyay.